सलमान खानका फिल्ममा किन हुँदैनन् चुम्बनका दृश्यहरु ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सलमान खानका फिल्ममा किन हुँदैनन् चुम्बनका दृश्यहरु ?
मुम्बइ । बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खान लवअफेयरका कारण चर्चामा रहन्छन् । फिल्ममा कुनै समय रोमान्टिक हिरोका रुपमा परिचित सलमान खान पछिल्लो समय एक्सन हिरोका रुपमा परिचित रहेका छन् । बलिउडमा बेड सिन, किस सिनलाई निकै प्राथमिकताका साथ हेरिने गरिन्छ । तर, यी कुराहरु सलमान खानका फिल्ममा भने पाइँदैन । किन उनी फिल्ममा किस सिन दिदैनन् ?
उनी बलिउडको यस्ता नायक हुन् जसले फिल्ममा भरपुर रोमान्स गरेका हुन्छन् तर किस भने गरेका छैनन् । सलमान खानले आफ्ना फिल्ममा किस सिन नदिनुको एकमात्र कारण आफुले खेलेको फिल्म हरेक परिवारले निर्धक्क रुपमा हेरुन् भन्ने नै हो, मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनले भनेका थिए, ‘परिवारसँग बसेर फिल्म हेर्दा असहज हुने वातारण मेरो फिल्ममा हुँदैन ।’
सलमानले जबदेखि आफ्नो फिल्मी करिअर थालेका थिए त्यो बेलादेखि नै उनले यो रुललाई पछ्याउदै आएका छन् । सलमानले आफ्नो पहिलो र एकमात्र लिपलक किस सुरज बड्जात्याको फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ मा भाग्यश्रीको साथमा गरेका थिए । तर त्यो किस पनि सिसाको गिलास बिचमा राखेर गरिएको थियो जसलाई पछि भिएफएक्सबाट मिलाइएको हो ।